UYAKHA: UMabhida usenaye omunye umsubathi azodla ngaye iComrades - Impempe
UYAKHA: UMabhida usenaye omunye umsubathi azodla ngaye iComrades
May 26, 2021 May 26, 2021 Impempe.com
UXolani Mabhida wazakhela igama ngesikhathi ecija uBongumusa Mthembu kanti manje usefuna ukukhombisa ukuthi yikhono lakhe ukukhiqiza abasubathi abasezingeni eliphezulu.
Lo mqeqeshi uthi usekhombe uNdumiso Sokhela njengoyena msubathi azophinde adle ngaye lo mjaho othandwa futhi ohlonishwa umhlaba wonke. Yize kungazange kucace ukuthi babangani, kodwa uMabhida noMthembu baphoxa abantu abaningi kwezokusubatha ngesikhathi behlukana.
Nokho bobabili sebakudlulisa lokho futhi bayaqhubeka nezimpilo zabo. UMabhida utshele Impempe ukuthi umsebenzi uyaqhubeka futhi usesophe ukubuya ngoSokhela kwiComrades emisiwe kulo nyaka. Nokho amkhulu amathemba okuthi izogijinywa ngonyaka ozayo uma sekudambile ukubhebhetheka kweCovid-19.
“Impela usekhona,” kusho uMabhida ebuzwa ngokuthi unaye yini umsubathi amlungiselela iComrades. “UNdumiso Sokhela uyazi naye ukuthi nguye esimbheke kwiComrades. Simcijela ukuba ayidle. Uma kungabanga ngonyaka ozayo, kumele nakanjani eminyakeni ezayo kwenzeke,” kuchaza uMabhida.
Uphinde waveza intokozo yakhe ngokwenza kahle kwabasubathi bakhe kwiNedbank Runnified eGqeberha ngempelasonto edlule. Abagijimi bakhe ababili, uSibusiso Kubheka noZinhle Tshabalala benze izikhathi ezinhle, baqokelwa eqenjini lakuleli elizoya kumaWorld Championship eChina.
“Benze kahle kakhulu futhi siyaziqhenya ngabo. Ukuqokelwa kwabo eqenjini eliya eChina kuwuphawu lokuthi sisenza kahle. Kuyasigqugquzela ke lokhu ukuthi siqhubeke.
“Okwamanje kodwa sizobanika ikhefu lamaviki ambalwa bake bahlale nemindeni yabo ngoba sizoba matasa kakhulu ngemuva kwalokho,” kusho uMabhida. UKubheka ungene endaweni yesihlanu kanti uTshabalala yena ungene kweyesikhombisa kulo mjaho waseGqeberha obubophele izihlabani zabagijimi.
Previous Previous post: ABAVELELE: Usale ngaphandle uRadaba kwababanga imiklomelo yeCSA
Next Next post: INKUMBULO: Bakhunjuzwe ubumnandi bokudlala phambi kwabalandeli abeChiefs